Ibsa Itti fufa hiriira deeggarsaa MCBO fi Mormii sirna bulchinsa PP ilaachisee kenname. | QEERROO
Posted on February 9, 2021 by Qeerroo
Qeerroon Bilisummaa Oromoo kabajaa hayyootaa, maanguddootaa, waldaalee amantaa fi siivilii garaa garaaf jecha malee durumaa bulchinsi OPDO, PP kun sirna nama nyaataa fi bartee TPLF tahuu sirnaan beeka. Imaanaan gootota Oromoo akka galmaan geessisan yoommuu isaanitti kennamu barii irraa shira akka eegalan itti dhiyeenyaanis beekna. Kanaafis, yeroo garaa garaatti ibsa baasaa turuun keenya ni yaadatama. PPn imaanaa dagachuu fi dagachuu irra darbuun inumaa ABO, KFO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo maxxantuu TPLF gochuun olola eegalte. Kanatti kan hin qaanofne hooggantootni PP kun WBO maqaa SHANEE jedhu moggaasuun ERGAMTUU WAYYAANEE jechuun duula ajjeechaa uummata Oromoo fi qabsoo Oromoo irratti labsan. ABO fi Hooggantoota ABO, bara jireenya isaanii guutuu uummata Oromoo fi qabsoo Oromoof jiraatan ABO SHANEE fi ERGAMTUU WAYYAANEE jechuun ifaan olola miidiyaa eegalan. Hooggantoota hedduus hidhan. Waajjira ABO fi KFO Oromiyaa keessaa guutuutti cufan. Ammas duula hamaa uummata Oromoo fi qabsoo Oromoo irratti xiyyeeffate gaggeessaa jiran. Kanaaf fakkeenyi guddaan yeroo dhihoo kana hiriira dirqii fi durgoon deeggarame, deeggarsa muummicha ministeeraa jedhani dha.
Kabajamoo Lammiilee Oromiyaa, Aktivistootaa fi firoottan Oromoo,
“Takka na sobde ati itti qaana’i; lama na sobde ani ittan qaana’a.” jedhama. Wareegama uummatni Oromoo amma kaffalaa jiruuf dogoggora kan PP duwwaa goonee ilaaluun sirrii miti. Nutu dogoggore jechuu fi lammaffaa gowwoomfamuu hin qabnu jechuu kan qabu nuyi dha. Jijjiiramni siyaasaa dhiiga ilmaan Oromoon gaanfa Afrikaatti dhufe kan butame tarsiimoo irraa jallachuu keenyaani. Taarsiimoo hunda hammataa nu ceesisu, kan dhaabotni, hayyootni, miidiyaaleen itti amanan, addunyaa biratti fudhatamaa fi dhageettii qabu qabaachuun murteessaa dha. Hayyootni, dhaabotni Oromoo, ABO fi KFOn haala walii galaa xiinxaluun lammiileen Oromiyaa nagaan, bilisummaan, tasgabbiin akka jiraataniif fuulli hayyoota, aktivistoota, Qeerroo fi Qarree hundi gara Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa akka deebi’u labsanii jiran. Qabsoo Oromoon taasisu qabsoo dhalootaaf nagaa fiduuti. Ofii wareegamnee dhalootni itti aanu biyya isaa irratti murteessee aangomuuti. Kanaaf, amma gootummaan aarsaa taanee seenaa keessatti yaadatamuun kabaja.
Hiriirri eegale hanga MCBO mirkaneeffamutti hin dhaabbatu.
Hiriira keessatti arrabsoon saba biraa, amantaa biraa tuqu, alaabaa saba biraa gubuu hin jiraatu.
Qabeenyaa barbadeessuun dhorkaa dha.
Hiriira gaggeeffamu keessatti kabajaan saboota biroof, shamarraniif, maanguddootaaf qabnu agarsiisna.
Mootummaan Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa nuuf haa mirkanaa’u
Hidhamtootni siyaasaa haalduree tokko malee haa hiikaman
Ajjeechaa, duulli Oromoo irratti maqaa shaneen gaggeeffamu haa dhaabbatu
Boordii filannoo haqaa malee maqaa hin barbaadnu
Waajjiraaleen ABO fi KFO haa banaman
Haqni Artist Haacaaluu Hundeessaa haa bahu
Sirni garboomsaa haa burkutaa’u
Aktivistootni, miidiyaaleen, dhaabotnii fi waldaaleen alaa fi keessaa kana hubachuun hiriira deeggarsaa MCBO fi mormii sirna bulchinsa PP, imaanaa gootota Oromoo kumaatamaan nu biraa wareegaman galmaan gahuu akka tumsu waamicha taasisna.
Injifannoo Lammiilee Oromiyaaf